Maxaa La Isu Barbardhigayaa Aqoonsiga Somaliland Iyo Bangladesh? – somalilandtoday.com
Maxaa La Isu Barbardhigayaa Aqoonsiga Somaliland Iyo Bangladesh?
(SLT-London)-Dooddii ka dhacday Baarlamaanka Ingiriiska ee ku aaddanayd Aqoonsiga Somaliland waxaa jiray dhawr xildhibaa oo siyaabo kala duwan uga hadlay. Xildhibaannada ay dadku aad u hadal hayeen aragtideeda waxaa ka mid ahaa haweeynayda Rushanara Ali, oo ka soo baxda xisbiga shaqaalaha kana soo jeedda bulshada Bengali-da ah ee asal ahaa reer Bangladesh ah.
Xildhibaanaddan ayaa is barbardhigtay doorkii dalkeeda Ingiriisku ka qaatay aqoonsigooda xilli ay kala go’ayeen Pakistan. Waxaana ay sheegtay maxaa arrinta Somaliland kaga duwan tahay taas oo ay weydiisay wasiirkii golaha ku sugnaa ee Chris Heaton-Harris.
“Waxaan rabaa in aan tusaale usoo qaato dalkii aan ku dhashay ee Bangladesh. Dawladdii Ingiriiska ee xilligaa jirtay waxa ay si toos ah u taageertay gooni isu taagga dalkii aan ku dhashay ee Bangaldesh oo markaa hagankiisii madax bannaanida kula jiray waddanka Pakistan. Dawladda Ingiriisku may odhan Pakistan ha go’aamiso gooni isu taagga Bangaladesh. Wasiirku miyaanu arkayn wax lala yaabo in ay tahay taa caksigeeda in immika la qaato, oo la yidhaa Somaliland iyo Somalia iyagu ha dhammaystaan hawlohooga.”
Haddaba Bangladesh sidee ayay aqoonsiga ku heshay?
Bangladesh waxa ay gashay mid ka mid ah dagaaladii ugu dhiig daadinta badnaa ee ebid taariikhda bini aadamka soo mara 1971. Sadex milyan oo naf hurid ah, kufsi ah iyo xadgudubka kale oo loo geystay in ka badan afar boqol oo kun oo haween iyo carruur ah ayaa horkacday dhalashada qaran cusub oo madax banaan oo ku jira khariidadda adduunka.
Doorka UK ee aqoonsiga Bangladesh?
Markii laga sii daayay xabsiga Pakistan, Aabbihii Qarannimada dalkaas, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman ku laabshadiisii Bangladesh 10kii January 1972. Isagoo ku sii jeeda Dhaka, Bangabandhu wuxuu ku hakaday London halkaas oo uu kulan kula yeeshay Ra’iisul Wasaarihii Ingiriiska ee xilligaas Sir Edward Heath goobta looga arrimiyo dalkaas 10 Downing Street. Tani waxay dhidibbada u taagtay dabeecadda gaarka ah ee uu ku dhisan yahay xidhiidhka labada dal.
Doorka UK ee Somaliland?
Inkastoo UK ayna si rasmi ah u aqoonsaneyn Somaliland, haddana waxay xafiis ku leedahay Hargeysa, waxayna Somaliland siisaa caawinaad.
Laakiin dhanka aqoonsiga, waxaa jira maamullo ka jira gudaha UK oo si toos ah u aqoonsan madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland.
Saddex magaalo oo ka mid ah ismaamullada hoose ee dalka Ingiriiska.
Jaaliyadda Somaliland ee ku nool magaalooyinkan ayaa ku guuleystay in ay dowladahooda hoose ku qanciyaan aqoonsiga Somaliland.
Tallaabadaas ayaa qayb ka ahayd dadaal ay Somaliland ictiraaf caalami ah ku raadineysay tan iyo bishii May ee sannadkii 1991-kii.